Uzbekistan waxay kordhisay xayiraadaha COVID-19 'Ilaa Xaaladda ay ka soo hagaageyso'
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Uzbekistan » Uzbekistan waxay kordhisay xayiraadaha COVID-19 'Ilaa Xaaladda ay ka soo hagaageyso'
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Uzbekistan • Wararka kala duwan
Laga bilaabo Luulyo 12, Uzbekistan waxay diiwaangelisay 116,421 caabuqyada coronavirus oo leh 111,514 ama 96% soo kabashada iyo 774 dhimasho.
Gelitaanka baabuurta baabuurta ee Tashkent waa la xaddiday.
Goobaha lagu caweeyo, hoolalka barkadaha, xarumaha ciyaaraha kombiyuutarka iyo meelaha wax lagu cuno ayaa loo oggol yahay inay shaqeeyaan laga bilaabo 08:00 illaa 20:00 waqtiga maxaliga ah.
Goobaha cuntada iyo madadaalada laguma buuxiyo wax ka badan 50% awoodda guud.
Xoghayaha saxaafada ee UzbekistanWasaaradda Caafimaadka, Furkat Sanaev, ayaa maanta ku dhawaaqday in xannibaadaha karantiil ee lagu soo rogay badhtamaha Aasiya 1 -da Luulyo muddo 12 maalmood ah la kordhiyay ilaa Covid-19 xaaladdu way soo hagaagaysaa. '
Sida ku cad go'aanka guddiga gaarka ah, laga bilaabo 1 -da Luulyo, soo -gelinta gawaarida gawaarida ee Tashkent waa la xaddiday, dhammaan dhulka jamhuuriyadda, qoob -ka -ciyaarka iyo naadiyada karaoke, hoolalka barkadaha, xarumaha ciyaaraha kombiyuutarka iyo meelaha cuntada dadweynaha ayaa loo oggol yahay inay ka shaqeeyaan 08:00 ilaa 20:00 wakhtiga maxaliga ah iyada oo shardi ah in aan la buuxin wax ka badan 50% awoodda guud. Xayiraadahaani way sii jiri doonaan ilaa xaaladda cudurrada faafa ay hagaagto, ”ayuu yiri afhayeenka.
Sanaev wuxuu kaloo raaciyay in qofku uusan aaminin macluumaadka lagu soo daabacay shabakadaha bulshada iyo qaar ka mid ah warbaahinta internetka oo ah in xayiraadihii karantiil la qaaday.
"Adeegga saxaafadda ee Wasaaradda Caafimaadka ayaa ka warbixin doona baajintooda ama kordhinta dheeraadka ah," ayuu yidhi.
Karantiilnimada ayaa lagu dhawaaqay Uzbekistan 1 -dii Abriil ee sanadkii hore oo ay qasab tahay in la soo bandhigo maaskaro ilaalin iyo fogeynta bulshada. Tashkent iyo dhammaan xarumaha gobolka waxaa laga dhawaaqay nidaam gooni-u-goosad ah, xiriirkii gaadiidka ayaa laga joojiyay dhammaan waddammada. Xannaanooyinka ayaa la xiray halka goobaha waxbarashadu u wareegeen barashada masaafada.
Dhamaadka 2020, xaaladda faafa ee Uzbekistan wuu xasiliyay waxaana si tartiib tartiib ah loo qaadayay xayiraadaha karantiilidda tan iyo bishii Maarso ee sannadkan. Adeeggii hawada ayaa dib loogu soo celiyay dalal dhowr ah, waxaa la oggolaaday gelitaanka dalxiisayaasha ajnabiga ah, nidaamkii keli-talisnimada iyo dhammaan xannibaadihii ku saabsanaa hawlaha madadaalada iyo goobaha cuntada.
Si kastaba ha noqotee, horraantii Maajo, xaaladda cudurrada faafa ayaa mar kale sii xumaatay waxayna guddiga gaarka ah bilaabeen inay adkeeyaan xannibaadaha tan iyo 1dii Luulyo.
Laga bilaabo Luulyo 12, jamhuuriyadda dhexe ee Aasiya oo ay ku nool yihiin dad ka badan 34.5 milyan oo qof ayaa diiwaangeliyay 116,421 caabuqyada coronavirus oo leh 111,514 ama 96% soo kabashada iyo 774 dhimasho.